Horumarinta wax soo saarka cusub
Xirfadlaha baloog-yaqaan xirfadleyda ah, ma jiro burushka qurxinta la mid ah sida loo yaqaan 'chopstick' marka aad wax cunayso. Qalabka ugu muhiimsan ee lagu qurxiyo qurxinta waa burushka qurxinta. Si loo hagaajiyo kaamilnaanta qurxinta, dabcan, waxa ugu muhiimsan waa in loo isticmaalo buraashka qurxinta qayb kasta oo ka mid ah qurxinta. Waxaa jira noocyo badan oo burush ah ...
Barashada qurxinta bilowga ah
Ugu horreyntii, qaybta aasaasiga ah ayaa weli aad muhiim ugu ah laylis. Tallaabada ugu horreysa waa dabcan nadiifinta wajiga (u soo jeedka subaxdii si aad u maydho saliid saa'id ah iyo dhidid wejiga). Qaybta labaad waa in la masaxo xoogaa biyo ah iyo kareem caano ah (inta badan qoyaanka wejiga. Maqaar ahaan qalalan, haddii tillaabadan ...
MURAN ee "COVID-19"
Xilligan cudurka faafa, shirkadeena waxay soo bandhigtay ruux u heellan "qaadashada qalbigeyga" kuna socda "rabitaan", ku biirinta adeegyada iskaa wax u qabso bulshada, u siinta iftiinka iyo kuleylka bulshadaan, kuna darida raad diirimaad bulshada. Waqtigu wax badan buu kordhiyaa. W ...
Warqad Ammaan ah
Yiwu Muran Import and Export Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2009, kuna taala caasimada aduunka ee badeecooyinka yaryar-Yiwu, Shiinaha Shirkadda ayaa had iyo jeer fulisa maareynta cilmiga waxayna ku adkeysatay "tayada ugu horeysa" inay ku guuleysato suuqa, sifiicanna way u fiicneyd helay by cusub iyo jir c ...